KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 01/04/2012
ကေအဲန်ယူနှင့်မြန်မာ အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆွေးနွး5_4_2012 night.mp4
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:52 PM No comments:
ဧပြီလ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) လက်အောက်ခံ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) က ဖွင့်လှစ်တဲ့ အပတ်စဉ် ၆ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းပွဲကို မနေ့က ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ခရိုင်မှာရှိတဲ့ KNLA တပ်မဟာ ၅ ရဲ့ စစ်ရေးပြကွင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
copy from http://drlunswe.blogspot.com.au/2012/04/knla.html
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:42 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:35 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:32 PM No comments:
KNU Delegations Meet Karen People in Pa-an5April 2012 (ရုပ်သံ)
တောင်ကလေးဆရာတော်ရဲ့ သြ၀ါဒတွေဟာ ရှင်းလင်းပြတ်သားလှပါတယ်။ ကရင်တမျိူးသားလုံး အကြောက်တရားတွေကနေ နိုးထကြပါတော့။ ဆရာတော် အရှင်ပညာသာမိကို ၀ိုင်းရံကြပါ။ ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် နှင့် ဒီကေဘီအေ ညီနောင်တို့ ကြားနိုင်ကြပါစေ။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:30 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:43 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:26 AM No comments:
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကေအဲန်ယူငြိမ်းကိုယ်စားလှယ်များဆွေးနွေးပွဲ - ၄ - ၄ - ၂၀၁၂ - ဖားအံ့မြို့(ရုပ်သံ) KNU and Burmese Government Peacetalk_Hpa-an_04.04.2012.mp4
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:09 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 12:05 AM No comments:
BANGKOK — Cease-fire talks reopened Wednesday between the government and leaders of the country's most enduring ethnic rebel movement, highlighting another major task for Myanmar as it opens up and enacts political reforms.
A statement from the Karen National Union said its general secretary Zipporah Sein led the group's delegation Wednesday from their headquarters on the Thai border forasecond round of talks to run until April 11. Initial talks were held in January.
It said the latest talks would be held in Pa-An near the Thai border, and subsequently in Yangon and Bago in central Myanmar.
Most of the groups, however, insist thatapolitical settlement giving them more autonomy is necessary to ensure lasting peace. One group, the Kachin in northern Myanmar, in actively engaged in sporadic though bitter fighting with the government.
"The purpose of these meetings is to engage all levels of society in the process of achieving peace inanation that has been in armed conflict for several decades," said the KNU statement. "The KNU believes that lasting peace should be achieved through the combined effort of all people who are directly and indirectly affected by the coming political change."
The KNU has been fighting for greater autonomy from Myanmar's central government since the country obtained independence from Britain in 1948. A Myanmar government offensive in the mid-1990s wiped out most of the KNU's strongholds and crippled its fighting ability.
The KNU statement said the talks would focus on details ofacease-fire between the KNU and the government, the gradual extension ofacease-fire to cover the entire country, civilian safety, trust-building and safeguarding human rights.
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 12:00 AM No comments:
/ 4/04/2012 11:21:00 AM /
ဒီကနေ့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များ ဒုတိယအကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက် ခရီးစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီး။ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ကရင်တမျိုးသားလုံးကိုကိုယ်စားပြုသောခေါင်းဆောင်ကြီးများအတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပေးကြပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန် ဖြစ်စေ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စေ......ကိုယ်ယုံကြည်ရာဘာသာမှာအစစအရာရာ အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့ ပြီး ဘေးမသီရန်မခပဲ ကောင်းကောင်းမွန် မွန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့အတွက် ကိုပါဆုတောင်းပေးကြပါ။ ဒါ့အပြင် စစ်မှန်တဲ့ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပါထည့်ပြီး ဆုတောင်းပေး ပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 11:57 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 11:54 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 5:18 PM No comments:
KNU Media Advisory April4English
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 5:16 PM No comments:
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) သည် အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အစိုးရအဆက်ဆက်ကို တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့သည်မှာ ၆၃ နှစ်ရှိပြီး အဖွဲ့၏ လက်ရှိဥက္ကဌမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောတာမလာဘော ဖြစ်သည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:22 AM No comments:
Federation of Trade Unions Kawthoolei-FTUK_Statement burmese
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:18 AM No comments:
Our Victory is People Victory AungSanSuuKyi says in the speech to the people on April2morning-video
Tourists flock to Myanmar to witness the historic election-video engl.
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:13 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:11 AM No comments:
အသက်တစ်နှစ်အောက် ကလေးတွေကိုပျားရည် လုံးဝ မတိုက်သင့်ပါ။ ပျားရည်မှာ သဘာဝအတိုင်း botulinum endospores ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုး ပါဝင်တာကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်က ဒီဘက်တီးရီးယား ကြီးထွားမှုကို ရပ်တန့်သွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့အထိ အလုံအလောက် မဖွံ့ဖြိုးသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကလေးရဲ့ အူကို ပိုးဝင်ကူးစက်မှု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:06 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:05 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:00 AM No comments:
Aung San Suu Kyi stands atabalcony at her constituency Wahtheinkha village, Kawmhu Township, Yangon, Myanmar, 31 March 2012. Aung San Suu Kyi was heading to the rural constituency of Kawhmu, from where she is contestingaby-election on 01 April – the first election the Nobel Peace laureate will contest in the country. Members of her National League for Democracy (NLD) party are contesting another 43 seats nationwide..Suu Kyi took residency in Wathinkha village, part of Kawhma district, in order to contest from the constituency. She will spend Saturday night with her adopted family in Wathinkha
A village headman prepares the guest bed for Aung San Suu Kyi, who announced she will stay overnight in her remote rural constitiency of Kawmhu where she stands foraseat in the parliamentary by-elections, Myanmar, 31 March 2012. Suu Kyi said 30 April she wanted to stay overnight so she could be in the constituency early 01 April, even though she is not registered to vote there as her home remains in Yangon. A new wave of reform in Myanmar is taking place ahead of parliamentary by-elections 01 April.
တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိူးအတွက် တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထားဆောင်သွားခဲ့သာ ဗိုလ်ကြီးစောဖါးလယ်(၈၅-နှစ်) အာ့း မှ knljapanဦးညွတ် အလေးပြု ပါသည်။
ဓါတ်ပုံ+သတင်း = ကွယ်ကလူ
thu ko pa lae
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:10 AM No comments: